२८ दिनदेखि अ’चेत नर्स मोनिकालाई यौ,’नश’क्ति बढाउने औ’षधि ‘भि’यग्रा’ दिँदा होस खुल्यो! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचार२८ दिनदेखि अ’चेत नर्स मोनिकालाई यौ,’नश’क्ति बढाउने औ’षधि ‘भि’यग्रा’ दिँदा होस खुल्यो!
२८ दिनदेखि अ’चेत नर्स मोनिकालाई यौ,’नश’क्ति बढाउने औ’षधि ‘भि’यग्रा’ दिँदा होस खुल्यो!
लन्डन। बेलायतमा २८ दिनदेखि अचेत महिला हो’समा आएकी छिन्। डेलीमेलका अनुसार को’रोना संक्रमणपछि ३७ वर्षकी नर्स मोनिका अ’ल्मिडा को’मामा गएकी थिइन्।
चिकित्सकहरुले पुरुषको यौ,’न श’क्ति बढाउने औ’षधि उनमा प्रयोग गर्दा त्यसले काम गरेको र उनी हो’समा आएको बताइएको छ। भि’यग्रा उच्च र’क्तचाप र महिला तथा पुरुषको शा’रिरिक क्षमता अभिवृद्धिको लागि पनि प्रयोग हुन्छ। प्रयोगात्मक उपचार व्यवस्था अन्तर्गत उनलाई अस्पतालले भि’यग्रा दिएको हो।
मोनिका दुई सन्तानकी आमा हुन् र उनले को’रोनाको दुबै खोप लगाएकी थिइन्। तर उनलाई अक्टोबर ३१ मा को’रोना संक्रमण देखिएको थियो भने नोभेम्बर ९ मा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। त्यसपछि बे’होस भएकी उनी को’मामा थिइन्। प्रयोगात्मक उपचार अन्तर्गत उनलाई भि’यग्रा दिइँदा उनी हो’समा आएपछि भि’यग्रा अन्य रो’गको लागि पनि उपयोगी हुन्छ भन्ने थाहा भएको छ।
पोर्चुगलमा जन्मिएकी यी नर्सको स्थिति ज्यादै नाजुक भइसकेको थियो सोही कारण उनलाई अन्तिम पटक भेट्न पोर्चुगलबाट उनका आमाबुवासमेत आएका थिए। तर भि’यग्राको प्रयोगपछि उनी डिसेम्बर १४ तारिखमा को’माबाट ब्यूँ’झिइन्। उनलाई क्रिसमसको पूर्वसन्ध्यामा घर जान दिइयो। मोनिका भन्छिन्,‘मैले पु’नर्जिवन पाए र यो मलाई क्रि’समसको उपहार भयो।’